फस्टाउँदै म्युजिक इन्डष्ट्रिज्, यी रहे २०७५ का चर्चित गित ! - सुनाखरी न्युज
फस्टाउँदै म्युजिक इन्डष्ट्रिज्, यी रहे २०७५ का चर्चित गित !
Posted on: April 13, 2019 - 7:07 am
वि.सं .२०७५ मा धेरै गित चचामा आएका छन् । यसवर्ष नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका लागि सफल गीतहरू बजारमा आए । लोकदोहोरी क्षेत्रमा युवापुस्ताको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ। उत्कृष्ट शब्द सिर्जना र लयले एकपटक फेरि नेपाली लोकदोहोरी जुर्मुराएको छ। कुनैबेला लोक गीत भनेर नाक खुम्च्याउने पुस्ता अहिले लोकगीतको असल श्रोता बनेका छन्। चलचित्रमा पनि यसपटक लोक लयका गीतहरू बढी मात्रामा समावेश गरिए । जुन चलचित्रलाई चर्चामा ल्याउन सफल पनि भए। श्रोताको राय र युट्युवबाट सबैभन्दा धेरै हेरिएका चलचित्र र लोक दोहोरी क्षेत्रका दश गीतबारे चर्चा गरेका छौँ।
यस वर्षको हिट फिल्मको रूपमा रहेको छक्का पन्जा-३ मा रहेको गीत पहिलो नम्बर बोलको गीतले यसपटक खुबै चर्चा कमायो। दीपकराज गिरि, दीपाश्री निरौला लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको उक्त फिल्मको यस गीतमा डेभिड शंकर र बिन्दु परियारको स्वर रहेको छ। राजेन्द्र थापाको शब्दमा रहेको उक्त गीतमा दीपक शर्माको संगीत रहेको छ। गीतलाई ३ कठोर ५६ लाखपटक हेरियो।
चंगाचेट चलचित्रमा रहेको गीत गोजीमा दाम छैन बोलको गीतले पनि आम दर्शक श्रोताको मन जित्न सफल भयो। राजनराज शिवाकोटी र मेलिना राईको आवाजमा रहेको उक्त गीतमा हरिहर तिमिल्सिनाको शब्द थियो भने संगीत राजनराज शिवाकोटी नै रहेको छ। ४ करोड पटक हेरिएको छ। फूल होइन नेपाल आइडलबाट नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका प्रताप दास यसपटक चर्चामा रहे। उनको स्वरमा रहेको फूल होइन भन्ने गीतले पनि युवापुस्ताको रोजाइमा पर्‍यो। प्रताप दास र प्रविशा अधिकारीको स्वरमा रहेको उक्त गीतमा संगीत एलिस कार्कीको रहेको छ भने शब्द भने राजेश कुमार श्रेष्‍ठको रहेको छ। यो गीतलाई २ करोड ५८ लाख पटक हेरिएको छ।
कुलेन्द्र विश्वकर्मा र मेलिना राईको स्वरमा रहेको मलाईदेखेरु बोलको गीतले पनि बजारमा राम्रो चर्चा कमायो। शब्द र संगीत ध्रुव शर्मा रहेको छ। यस गीतलाई पचास लाखपटक हेरिएको छ। अभिनय भने ध्रुव शर्मा र जुना सुन्दासले गरेका छन्।